Global Voices teny Malagasy » Nanao fihetsiketsehana tao Baku ny vehivavy taorian’ny famonoana olona mahatsiravina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Febroary 2021 5:15 GMT 1	 · Mpanoratra OC Media Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Azerbaijan, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta
Vondrom-behivavy milanja sora-baventy «Politika ny famonoana olona.» Sary avy amin'ny pejy Facebook-n'i Gulnara Mehdiyeva, tamin'ny alàlan'ny OC Media ary nahazoana alàlana.
Tao amin'ny OC Media ity lahatsoratra ity no nivoaka voalohany tamin'ny teny Anglisy . Navoaka eto indray ny lahatsoratra nasiam-panovana tamin'ny alàlan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nanao fihetsiketsehana nanoloana ny Lapam-panjakana tamin'ny 4 Febroary ho setrin'ny famonoana vehivavy tamin'ny fomba feno habibiana tany Bakò ireo feminisista any Azerbaijan.
“Na eo aza ny toe-javatra mampahonena iainan'ny vehivavy any Azerbaijan dia tsy mandray andraikitra matotra ary tsy mijery ny toe-java-misy ankehitriny ny Komitim-panjakana misahana ny raharaha momba ny Fianakaviana, ny Vehivavy ary ny Ankizy”, hoy  ny iray tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny Voice of America.
Nilanja sora-baventy mivaky hoe “politika ny famonoana vehivavy” ireo mpanao fihetsiketsehana, sora-baventy nalain'ny polisy rehefa nahita ny zava-niseho nandritra ny minitra vitsy. Namoaka ireo vehivavy hiala ilay toerana ihany koa ny polisy.
Nilaza ny mpanao hetsi-panoherana fa ny famonoana  feno habibiana an'i Banu Maharramova, vehivavy 32 taona, no nahatonga ny fihetsiketsehana izay hita tao anaty daba-pako tany amin'ny distrikan'i Nasimi, Bakò ny vatany voarasarasa ny 27 Janoary. Nilaza ny polisy tany an-toerana fa maty novonoin'ny rafozan-dahiny 75 taona, Idris Maharramov izy.
Nilaza ny polisy fa rehefa avy namono ity vehivavy ity i Maharramov dia norasarasainy ny vatany, ary nataony tao anaty kitapo plastika sy natsipiny tany anaty fitoeram-pako tany amin'ny distrika teo akaiky teo. Raha ny filazan'ny mpifanila vodirindrina aminy, miara-mipetraka amin'ny zanany kely roa i Banu Maharramova sy ny rafozany ihany koa, ary ny vadiny kosa mipetraka any ivelany.
Taorian'io tranga io, notanan'ny polisy i Idris Maharramov. Mbola any am-ponja vonjimaika izy, ahiahiana ho ninia namono olona. Mbola mitohy ny famotorana.
Niteraka fahatezerana tao amin'ny tambajotra sosialy ity vaovao momba ny famonoana olona ity niaraka tamin'ny tenirohy #banuüçünsusma (aza mangina ho an'i Banu).
Nilaza i Aghazadeh fa efa nanomana mialoha ny fihetsiketsehana izy ireo ho valin'ny famonoan-tena roa nataon'ny tovovavy roa tamin'ny volana Janoary. “Mariky ny herisetra miseho matetika sy ny tsy fisian'ny fanampiana ara-tsosialy atrehin'ireo vehivavy ao Azerbaijan” hoy izy ny fahafatesan'izy ireo.
“Mahatsiaro ho voafandrika ny vehivavy,” hoy i Aghazadeh, “vitsy loatra ny trano fialofana ho an'ny herisetra an-tokantrano ary misalasala izy ireo manao antso avo amin'ny polisy satria matetika manao fampihavanam-pianakaviana ny polisy, raha sady mamerina ireo niharam-boina any am-pelan-tànan'ireo mpanararaotra azy ireo fotsiny.”
“Ny hisarihana ny sain'ny Mpanelanelana sy ny Komitim-panjakana misahana ny Raharaham-pianakaviana, ny Vehivavy ary ny Ankizy no tanjon'ny fihetsiketsehana ataonay manoloana ny Lapam-panjakana izay manana birao ato amin'ity tranobe ity, ary tompon'andraikitra mivantana amin'ny ady amin'ity olana ity ao amin'ny firenena.” hoy i Aghazadeh.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/02/25/151601/
 nivoaka voalohany tamin'ny teny Anglisy: https://oc-media.org/after-grisly-murder-women-hold-protest-in-baku/
 famonoana : https://report.az/multimedia/bakida-qadinin-oldurulerek-dogranildigi-eraziden-videoreportaj/
 Nilaza : https://apa.az/az/hadise/Bakida-zibil-qutusundan-meyiti-tapilan-qadini-qayinatasi-oldurub-colorredYENILNIBcolor-colorredRSMIcolor-626633